Xiaomi Mi Makaralı Mutauri 16W ongororo: Yakanaka odhiyo, mutengo wakakura
Izvo zvinogara zvakanaka kuve nemimwe mimhanzi ichikuperekedza iwe uchinakidzwa neimwe "me-nguva". Kugadzirira kune yako playlist iwe uchiverenga, kana kunyora, kana kuwacha mbichana, kunyanya pamusoro pemutauri weasina waya isingaenzanisike mufaro. Mukona rekamuri yangu, iri Sony SRS XB32 isina waya mutauri iyo inowanzo kupihwa basa rekuchengetedza ini ndakaputirwa kumusoro. Kwemazuva gumi apfuura, Xiaomi… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi Mi Makaralı Mutauri 16W ongororo: Akanaka odhiyo, mutengo mukuru
Poco M3 ongororo: Pasina pane huwandu hwayo zvikamu
Iyo Poco M3 ndeye zvese nezvekugona. Nekurembera iyo karoti yemutengo wakaderera, pamwe chete neakanyatso kutsanangurwa maficha, kuverenga-kuburikidza kweiyo spec rundown zvirokwazvo inonzwika inonakidza. Asi zvinofadza zvechokwadi mukuita? Nemakwikwi akaomarara kubva kuvatambi vakasimwa, senge Moto G akateedzana, pane zvimwe zvakawanda zvekufunga kana iwe uchitsvaga kutenga chaiko ... [Verenga zvakawanda ...] nezve Poco M3 ongororo: Pasina pane huwandu hwayo zvikamu
Xiaomi's Redmi K40 trio debuts ine flagship silicon uye beefy specs pamutengo wemabhonha
Xiaomi adzoka achiita zvainoita zvakanyanya - kuvhura mafoni akashongedzerwa pamutengo unenge usingatendeke. Nhasi, yayo Redmi sub-brand yakazivisa yayo yakasarudzika portfolio - iyo Redmi K40 dzakateedzana - izvo zvingangoita kuti zviitwe kune mamwe misika futi, kunyangwe paine imwe runyerekupe rwekudzokazve mu tow. Iyo kambani yakaparura nhare nhatu pamwe chete - Redmi K40, Redmi K40 Pro, uye Redmi K40… [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi's Redmi K40 trio debuts ine flagship silicon uye beefy specs pamutengo wemabhonji
Redmi Cherechedzo 9T kuongorora: Simba uye kurwa
Gore rega rega Xiaomi's Redmi offshoot - inozivikanwa nemafoni ayo ebhajeti - inogadziridza yayo yazvino uye yakakura nepakati-kutenderera 'T' musiyano, ichiwedzera zvimwe zvishoma kumatanho. Panyaya yeRedmi Cherechedzo 9T chinangwa chaive chekupfuura kupfuura yaitove inoshamisira Cherechedzo 9 - iyo yatakaona iri stellar inodhura 5G foni. Dambudziko nderekuti, zvinhu hazvigare zvichienda zvachose kuronga. Patakatanga… [Verenga zvakawanda ...] nezve Redmi Cherechedzo 9T ongororo: Simba uye kurwa
Xiaomi Mi 11 ongororo: Yakarongedzwa neinogona
Munguva pfupi yapfuura pane imwe nguva apo Huawei - uyo panguva iyoyo shasha yekuChina kunze kwenyika - airatidzika kunge akagadzirira kurova semhando huru inotevera (chokwadi, ichiri hombe, ishoma pasirese izvozvi). Asi matafura akachinja nekukurumidza - zvakanyanya kudzika kuhondo dzezvematongerwo enyika - kuvharira kunze kweGoogle Services, izvo zvakasiya musuwo wakavhurika muEurope kuti mamwe ma brand apinde mukati. [Verenga zvakawanda ...] nezve Xiaomi Mi 11 ongororo: Yakarongedzwa neinogona
Munguva pfupi yapfuura isu takawana isinganzwisisike kuburitswa pane yedu Mi 10 smartphone iyo parizvino iri kushanda pane MIUI 12 Global vhezheni. Iyo nyaya yaive yakabatana neyekuvharira skrini yekumusoro kweMIUI, uko mushure mega pega kutangazve iyo skrini yekumusoro yakagadziriswa mifananidzo inonyangarika. Muvambi wedu Abhishek akasimudza nyaya yacho pasocial media uye akabvunza Xiaomi kugadzirisa. Parizvino takamirira gadziriso yepamutemo kubva ku… [Verenga zvakawanda ...] nezve Fix MIUI 12 Bug Inoita Kuti Mifananidzo Inonyangarika Kubva Kumba Screen